यो झारले किड्नीमा आउने समस्या मात्र होईन किड्नी फेल हुनबाट पनि बचाउँछ,यसरी गर्नुहोस प्रयोग – Sunaulo Nepal TV
एजेन्सी । किडनी मानव शरिरकाे एउटा महत्वपूर्ण अ‌ंग हाे । तर हाम्राे आफ्नै कारण र हाम्राे खानपाकाे अनियमितताका कारण किड्नी फेल हुने घटनाहरु हिजा आज सामान्य जस्तै बनेकाे छ ।किड्नी फेल हुनु भनेकाे किड्नी खुम्चनु हाे । किड्नीमा रहेकाे नेफ्राेन्स भन्ने अंगले शरिरलाइ नचाहिने अनावश्यक फाेहाेर पिसाबका रुपमा बाहिर पठाउने गर्दछ । तर किड्नी खुम्चिएकाे अवस्थामा नेफ्राेन्स थिचिनाले यसले राम्ररी फाेहाेर छान्न सक्दैन ।
यसाे हुँदा हाम्राे शरिरमा रहेकाे विषाक्त पदार्थ Creatinine र Urea का रुपमा रगतका माध्यमबाट शरिरमा फैलन्छ । यसैलाइ आधुनिक औषधि विज्ञानले किड्नी फेल भएकाे भन्दछ । र यस अवस्थामा किड्नी फेर्ने बाहेक अर्काे बिकल्प याे विज्ञानसँग छैन ।
काली गेडी परि गाेलभेडा जंगली बिही वा काकमाची लगायत ठाउँ अनुसार नेपालीमा सम्बाेधन हुने याे झार नेपालमा जताततै पाइन्छ । अंग्रेजीमा Common Night Shade र वैज्ञानिक नाम Solanum americanum mill भएकाे याे झारका ससाना दाना पाके पछि काला हुन्छन् र केटाकटीले यदाकदा खाने पनि गर्दछन् ।
यो पनि पढ्नुस: किन किड्नी खराब हुन्छ ? १. चिसो सर्दी र चिसोको समस्या भइरहन्छ भने यसप्रति अज्ञानता नदेखाउनुहोस् । चिसोले पोस्ट इन्फेक्टिभ ग्लोमेरोनेफ्राइटिस नामक रोग लाग्छ । यसले किड्नीमा व्याक्टेरिया उत्पन्न गर्छ
८. ज्यादा ननभेज खानेकुरा मासुमा प्रर्याप्त मात्रामा प्रोटिन हुन्छ । धेरै प्रोटिनले किड्नीमा मेटाबोलिक लोड बढाउँछ र किड्नी स्टोनका समस्या ल्याउछ । दिनमा ७ देखि ८ घन्टा नसुत्ने मानिसमा उच्च रक्तचाप र मुटुको समस्या हुने गर्छ ।
यस्ता १० संकेत देखिए मृगौला खराब भएको हुनसक्छ : १. छिटो-छिटो पिसाब लाग्नु – यदि मृगौला खराब भएको छ भने बारम्बार वा छिटो-छिटो पिसाब लाग्ने हुन्छ । बिशेषगरी, रातको समयमा यस्तो समस्या बढी हुन्छ ।
Previous यस्ता संकेत देखिए भने हुनसक्छ ‘ब्लड क्यान्सर’, यी लक्षणलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता